नेकपाका लागि कस्तो रह्यो वर्ष २०७६ ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
नेकपाका लागि कस्तो रह्यो वर्ष २०७६ ?
चैत्र ३०, २०७६ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — उपलब्धी र कमजोरीमा मात्रै होइन निर्णय र आन्तरिक विवादले भूमरीमा फँसेको देशको पहिलो राजनीतिक शक्ति सत्तारुढ नेकपाका लागि वर्ष–२०७६ मिश्रित रह्यो ।
फाइल तस्बिरः नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक ।
पार्टी एकतासम्बन्धी दर्जनौं निर्णय लिएर नेकपाले तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको एकताको पुष्टि गर्ने कोशिस गर्‍यो र यसमा सफल पनि देखियो । तर, जिम्मेवारी बाँडफाँड र विभिन्न मुद्दामा पार्टीभित्र मच्चिएको भाँडभैलोले संगठनात्मक एकताको उपलब्धी नै ओझेलमा पर्‍यो ।
त्यति मात्र होइन दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच बेलाबेला देखिने अन्तरकलहको असर नेकपाको आन्तरिक जीवनमा धेरै नै पर्‍यो । सरकार र पार्टीबीच समन्वयको ठूलै अभाव देखियो । पार्टीका सुझाव सरकारले नमान्ने र सरकारको कामको प्रचार पार्टी नेताले नगर्ने अबस्था बन्यो ।
सरकारको कामको स्वामित्व पार्टीले लिन सकेन, नतिजा सरकारका निर्णयहरु एकपछि अर्को विवादमा तानिए । यसको मार नेकपाले खेप्यो । विवादित विषयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले मात्रै होइन नेकपाका नेताले पनि आलोचना खेप्नपर्‍यो ।
सरकार र पार्टीबीच समन्वय नहनु यो वर्षको कमजोरीका रुपमा हेरेका छन, नेताहरुले । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारलाई सफल बनाएर लोकतन्त्रलाई पनि अझै मजबुत बनाउने र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको काममा मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
२० महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक र एक बर्षपछि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर नेकपाले संगठनलाई चुस्त बनाउने योजना बनायो । तर, कोरोनाको सन्त्रासपछि बनेको कार्ययोजना पनि स्थगित गर्नुपर्ने अबस्था आयो । सम्रगमा वर्ष–२०७६ मा नेकपाको आन्तरिक जीवन धेरै नै चलायमान रह्यो ।
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने सचिवालयको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले चुनौती दिए, जसले गौतमको राष्ट्रियसभा प्रवेशको ढोका खुलेन । तर, यही मौकामा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित १६ जनालाई नेकपाले राष्ट्रियसभामा पठायो ।
वर्षभर नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चल्यो । समीकरण फेरबदल भइरहे । र, असन्तुष्टि पोखिए । यो वर्ष नेता माधवकुमार नेपालका लगातार असन्तुष्टि आए । उनले पार्टी निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै आए । नेता नेपाल र प्रधानमन्त्रीबीच पार्टी बैठकमै चर्काचर्की भयो । गौतम निवास भैंसेपाटीमा सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुको भेलाले नेकपाभित्र ठूलै खेलाबैला ल्यायो ।
प्रतिवेदनमै पार्टी संस्थागत नभएको र गुट सक्रिय रहेको लेखियो । नेकपामा वर्षभर पार्टी अनुशासनको चर्चा भयो तर कार्यन्वयनमा देखिएन । सार्वजनिकरुपमै नेता–कार्यकर्तावीच आरोप–प्रत्यारोप र घोचपेच चल्यो । शीर्ष नेताबाटै गुट चलाइएको आरोप लागिरह्यो । तर, पार्टीभित्र यसको खबरदारी कम भएको नेताहरुको बुझाई छ ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा जर्बजस्ती करणीको मुद्दामा तानिए, राजीनामा दिए । यो विषयले नेकपाभित्र बहस जन्मायो । यही मौकामा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष जित्दै अग्नि सापकोटा सभामुख हुने मौका पाए । लामो समय दावी कायम राखे पनि उपसभामुख रहेकी शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले सभामुखको कुर्सी पाइनन् । पार्टीभित्र पुरुषवाद र सामन्तवादी सोच रहेको बताएकी उनले केही समयमा मन्त्री पद भने पाइन् ।
यो वर्ष प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको अस्पताल आवतजावत बाक्लै भयो । मिर्गौलाको दोस्रोपटक प्रत्यारोपण भयो । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण नेकपाको बैठक र संगठनात्मक काम प्रभावित बने । नेता वेदुराम भुसाल संगठन र कार्यक्रम दुवै हिसावले २०७६ नेकपाका लागि धेरै उत्साहजनक नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार संगठनात्मक एकतामा दुई अध्यक्षकै प्रतिबद्धतासमेत पूरा भएनन् ।
यो वर्ष नेकपाको आन्तरिक जीवनमा अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को धेरै चर्चा भयो । संसदबाट एमसीसी पास गराउने विषयमा पार्टीभित्र मतभेद भयो । कार्यदल बन्यो । तर, यो मुद्दा निश्कर्षमा पुगेन । संसद अधिवेशन अन्त्य भयो । तर, नेकपाले निश्कर्षमा पुगेन । त्यसैले नेता राम कार्की भन्छन्, ‘२०७६ नेकपाका लागि उत्साहजन स्थिति रहेन ।’
विवाद र खिचातानीकाबीच मंसिरमा ओली र दाहालमा शक्ति बाँडफाँड भयो । ओलीले पाँच बर्ष सरकार चलाउने र दाहालले पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाउने सहमति भयो । तर, अधिकार प्रयोगलाई लिएर दुई अध्यक्षवीच विवाद कायमै छ । यद्यपि कार्यकारी भूमिकापछि दाहालले सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको अध्यक्षता गर्ने मौका पाए ।
प्रवक्ता श्रेष्ठ थप्छन्, ‘संगठनात्मक काम ढिला भयो । सबैभन्दा नकारात्मक कुरा त्यहीे हो । पार्टी एकतालाई अझ बढी मजबुत गर्ने सवालमा अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था पनि कायमै छ ।’
सम्रगमा नेताहरुको बुझाई छ, ‘पार्टीमा बेथिति छन् । पार्टी प्रणालीमा चलेको छैन । तर, यो रोक्न भित्रैबाट ठूलो दवाव बनेको छैन । एकीकृत आवाज उठेको छैन । सरकार र पार्टीबीच समन्वय छैन जसले तलैसम्म नकरात्मक सन्देश गएको छ ।’
२०७६ ले नेकपालाई मिलेर अगाडि बढ्ने बाटो पनि देखाएको छ र थप झगडा गर्ने अनभूव पनि दिएको छ । तर, उनीहरु के गर्छन ? त्यो नेताहरुमै भर पर्नेछ ।
नेताहरुको नजरमा नेकपाका लागि–२०७६ कस्तो ?
सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका लागि मेहनत गर्नुपर्ने देखियो
नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता नेकपा
ऐतिहासिक महत्वको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र लोकतन्त्रको व्यवहारिक अभ्यास, सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक समृद्धि खोजेका हुन् । त्यही कारणले गर्दा संविधान संस्थागत भइसकेपछि संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा निर्वाचनबाट हाम्रो पार्टीलाई मूलत जनादेश दिएको पनि हो ।
त्यहीअनुसार पार्टी अगाडि बढ्ने प्रयत्न भईराखेको छ । तर लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको निम्ति बहस छलफलको सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकै पृष्ठभूमिमा अहिले कोरोना भाईरसको संकट देखा पर्‍यो । अहिले सिंगो संघीय सरकार अन्तरगत सबै राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज आम जनता एकतावद्ध भएर यसमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्ने छ । समग्रमा सरकारलाई सफल बनाएर लोकतन्त्रलाई पनि अझै मजबुत बनाउने र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको काममा मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ, एउटा ।
अर्को, सांगठनिक एकीकरणको काम ढिला भयो । मूलभुत रुपमा सकिएर केही बाँकी कामलाई छिट्टै सक्ने भनिएको थियो । त्यो काम गर्ने भन्दाभन्दै कोरोना संकटले पछाडि धकेलिएको छ । मुख्यत एकीकरणको काम ढिला भयो हाम्रो सबैभन्दा नकारात्मक कुरा त्यो हो । पार्टी एकतालाई अझ बढी मजबुत गर्ने सवालमा अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था पनि कायमै छ ।
यो वर्ष नेकपाका लागि धेरै उत्साहजनक रहेन
बेदुराम भुसाल, नेता नेकपा
सांगठनिक एकीकरणको काम २०७५ मा जति पनि भएनन् । प्रदेश कमिटी २०७५ मै बनेका थिए । त्यसभन्दा तलका स्थानीय तहले नै गरेका हुन् । विभागहरु बन्न सकेनन् । आयोग बनेनन् । त्यसहिसाबले सांगठनिक एकीकरणको काम २०७५ मा भन्दा कम भयो ।
सांगठनिक काम कमजोर रहेको कारणले सरकार र पार्टीबीच समन्वयको अभाव देखियो । पार्टीका बैठक नबस्नु भनेको पार्टी संस्थागत ढंगले नचलेको बुझिन्छ । सरकारको कामको प्रभावकारीतामा पनि प्रभाव पर्यो । त्यसको असर कार्यकर्ता र जनतामा परेको छ । त्यो असर सकारात्मक छैन, नकारात्मक छ ।
पार्टी विधान अनुसार एक बर्षमा केन्द्रीय कमिटी बैठक २ पटक बस्नु पर्दथ्यो । स्थायी कमिटी बैठक ४ पटक बस्नु पर्दथ्यो । तर, २०७६ मा केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठक एकएक पटक बस्यो । यो नै २०७६ मा नेकपाको उपलब्धी हो ।
दुवै बैठकमा सरकार र पार्टीलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने छलफल भयो । विधानअनुसार पार्टीका बैठक बस्छन् र पार्टीलाई संस्थागत ढंगले चलाइन्छ भन्ने प्रतिबद्धता नेतृत्वबाट आएको थियो । पार्टी एकीकरणका काम १५ दिनमा सक्ने प्रतिबद्धता पनि आएको थियो । तर, त्यो प्रतिबद्धता पूरा भएन । उत्साहित केन्द्रिय सदस्य निराश भए । पछि कोरोना भाइरस आयो । यसले बहाना मिल्यो । त्यसहिसाबले २०७६ नेकपाका लागि धेरै उत्साहजनक रहेन ।
पार्टी प्रणालीमा चलेन
राम कार्की, नेता नेकपा
राजनीतिक आन्दोलनमा काम गरेको हिसाबले भन्दा पहिला–पहिला पार्टीमा नेताहरुले मनमर्जी काम गर्न पाउने स्थिति थिएन । अहिले नेताहरु पार्टीको कुनै कमिटीप्रति अनुवन्धित नहुने, जनता देशप्रति उत्तरदायी नहुने स्थिति देखियो ।
कम्युनिष्ट पार्टी देश र जनतालाई राम्रो दिशामा लैजान गठन गरेको हो । कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु आफ्ना कमिटीप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो । चाकडीका आधारमा आफ्नो आसेपासेलाई मात्रै जिम्मेवारी दिने तर लामो समय काम गरेका नेता कार्यकर्ता वञ्चित हुने देखियो ।
सबैभन्दा दुखको कुरा यो प्रवृत्तिको विरुद्ध लड्न सकिएन । जहिले पनि सत्तामा पुग्नेहरु अधिनायकवादी बन्न खोज्छन् । तर त्यसको विरुद्ध पार्टीभित्र प्रभावशाली लडाँइ हुनु पर्दथ्यो । पार्टी भित्र थुप्रै मान्छेहरु बोलिरहेका छन् ।
पार्टीलाई संस्थागत बनाउँ, सुधारौं, सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउँ भनिरहेका छन् । तर, उनीहरुको स्वर एकठाउँमा आउने र प्रभावकारी बन्ने स्थिति रहेन । आफ्ना–आफ्ना तालमा बोलिरहेका छन् । सरकारले गरेका गलत कुराको विरोध गर्ने, पार्टीमा मनपरितन्त्र नआवोस् भन्ने आवाज सुनिन्छ । तर, ती आवाज संगठित भएनन् ।
ती आवाज एकीकृत गराउन सकेनौं । हामी लोकतन्त्रको सम्मान गर्छौ, जनवादको सम्मान गर्छौँ, सामूहिकतामा विश्वास गर्छौँ । त्यस हिसाबले हामी लाचार भयौं, कमजोर भयौँ । पार्टीको विरुद्ध बाहिरबाट ओरोप लागिरहेका छन् । नेताहरुका एकदमै नजिकका मान्छेहरुले कुतर्क दिएर विश्लेषण दिएको देखिन्छ । नेताहरु पारदर्शी बन्ने, उत्तरदायी बन्ने देखिदैंन । ठूलो पार्टी छ । पार्टी प्रणालीमा चल्नुपर्ने हो, तर त्यो देखिएन । हामीले पनि त्यो प्रणालीको लागि संघर्ष गर्न सकेनौं । २०७६ नेकपाका लागि उत्साहजन स्थिति रहेन । प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७६ २०:१८
चर्चामा २०७६ साल : बालुवाटारको जग्गा, महरा काण्ड र हिटलर सम्झाउने आलम
प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराए, बाँस्कोटाले २ मिनेट ३० सेकेन्डको अडियोमा कुर्सी गुमाए
चैत्र ३०, २०७६ जयसिंह महरा
काठमाडौँ — वि. सं. २०७६ सालमा मुलुकमा चर्चामा रहेका विषयले आशाभन्दा पनि निराशा देखाएका छन् । २० दिनयता लकडाउनको अवस्थामा छौं । मान्छेहरू आफूलाई कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)बाट जोगाउन कि त आफूलाई घरको चार पर्खालभित्र सीमित पारिरहेका छन् । यस्तो बेला सडक सुनसान छन् । केही व्यक्ति भने सयौं किलोमिटर दूरी पैदल पार गरेर घरको यात्रामा छन् ।
नयाँ वर्ष आउन लागेको छ । यो बेला जानै लागेको वर्षमा के के भए भनेर सम्झिने प्रयास गरेका छौं । फर्किहेर्दा मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रमा उल्लेख्य कुरा केही भएको जस्तो लागेन । राजनीतिक नेतृत्त्व व्यक्तिगत अल्झनमै सीमित बनेको देखियो । ठूल्ठूला व्यक्तिहरू पनि अल्झनमै परेका देखिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा प्रकरण २०७६ सालभर चर्चामा रह्यो । शक्तिमा रहेका नेता, कर्मचारी र व्यापारीको साँठगाँठले चाह्यो भने प्रधानमन्त्री निवाससमेत रहेको जग्गालाई कसरी व्यक्तिगत बनाउँदा रहेछन् भन्ने घामजत्तिकै छर्लंग बनायो ।
झन्डै ३ सय रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा गरिएको यो घटनामा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलगायत ११० जनाविरुद्ध माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालयका तीन सचिवका साथै मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयका दर्जनौं कर्मचारीको नाम पनि उक्त मुद्दा खेप्नेहरूमा छन् ।
बालुवाटारको जग्गा किन्ने 'हाइप्रोफाइल'विरुद्ध मुद्दा दर्ता नगरिएको विषयले पनि चर्चा पायो । बालुवाटारको जग्गा किन्ने ६५ जनाले फिर्ता गर्न तयार रहेको भनेर अख्तियारसँग भनेकाले मुद्दा दर्ता गर्नु नपरेको सरकारी पक्षको भनाइ रह्यो । त्यसरी जग्गा फिर्ता गर्नेमा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलगायत थिए । उक्त जग्गाबारे मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएन । यी विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद बैठक नै अवरुद्ध गरेको थियो ।
यो प्रकरणमा भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको जोडी तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङ लगायतविरुद्ध पनि मुद्दा चल्यो । यिनीहरूको योजनामा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व परेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो ।
माओवादी लडाकुबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुखसम्ममा कृष्णबहादुर महराको यात्रा साँच्चिकै लामो थियो । पछिल्लो १२ वर्ष पटकपटक मन्त्री बनेका उनी मुलुकको वरियताक्रमको पाँचौं ठूलो पद सभामुखमा पुगेका थिए । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिएका उनले बलात्कार प्रयासजस्तो गम्भीर आरोप खेप्नुपर्‍यो । र, सभामुख पदबाट पनि हात धुनु पर्‍यो ।
सभामुखको पदमा रहेका बेला महराले संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि असोज १२ गते बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लाग्यो । असोज १९ गते उनी सभामुखको निवास बालुवाटारबाटै पक्राउ परे ।
त्यसपछि, उनी ३० दिन हिरासत र १०३ दिन डिल्लीबजार कारागारमा बसे जहाँ उनले सांसदको सपथ खुवाएका टीकापुर घटनाका अभियुक्त रेशम चौधरीलगायत पूर्व सुरक्षाअधिकारी थिए ।
कारागारभित्रैबाट मुद्दा लडेका महराले फागुन ५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सफाइ पाए। अदालतबाट सफाइ पाउने बेलासम्म महराले खडा गरेको राजनीतिक उचाइमा भने ठूलो धक्का लागिसकेको थियो । यता, महराको ठाउँमा अग्‍निप्रसाद सापकोटा प्रतिनिधि सभाको सभामुखका रुपमा आइसकेका छन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मन शासक एडोल्फ हिटलरले यहुदीहरूलाई ग्यास च्याम्बरमा हालेर नरसंहार गरेको कुरा पढेको अहिलेको पुस्ताले यो वर्ष नेपालका नेताले गरेको त्यस्तै नरसंहारको घटना विवरण पढ्न पाए ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य अफताव आलम असोज २६ गते पक्राउ परेसँगै उनले गरेका नरसंहारका घटनाले चर्चा पायो । उनले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा जीत हासिल गर्नका लागि करिब २ दर्जन व्यक्तिलाई इट्टाभट्टामा हालेर पोलेका बयानहरु सार्वजनिक भए ।
राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै घटनालाई १२ वर्ष दबाउन सफल रहेका आलम हाल कारागार चलान गरिएका छन् । उनीविरुद्ध जन्मकैदको माग गर्दै मुद्दा दायर भएको छ ।
२०६४ चैत २६ गते चुनावको दुई दिनअघि घरमै बम बनाउने क्रममा घाइतेलाई आलमको नेतृत्वमा इट्टाभट्टामा हालेर मारिएको तथ्य यो वर्ष मात्रै सार्वजनिक भयो । त्यसपछि उनी निर्वाचित भएर मन्त्री पनि बने । शक्तिले सधैं साथ नदिएपछि आलम पक्राउ परेका हुन् ।
नेपालबाट उत्तरी छिमेकी चीनमा जाने नेताको लर्को गनिसाध्य हुन्न । वर्षैपिच्छे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, शीर्ष नेताहरूले चीन भ्रमण गरेका समाचार पढे लेखेकै हौं । यो वर्ष भने चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरे ।
चीनका राष्ट्रपति चिनफिङ असोज २५ गते दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आए । उनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिनुका साथै नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उँचो बनाएको रूपमा ब्याख्या गरियो ।
सन् १९९६ पछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आएका थिएनन् । तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जमिन दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।
सीको भ्रमणका क्रममा नेपाल-चीनबीच २० बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यस्तै, नेपाल-चीन समृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदारी गर्ने सीले बताएका थिए । सीको भ्रमणले हिमालपारीको व्यापार सम्बन्ध सुमधुर हुनुका साथै भारतमा मात्रै निर्भर नेपाललाई चीनबाट पनि थप सहयोग मिल्छ भन्ने देखिएको छ ।
यो वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य पनि चर्चाको विषय बन्यो र अझै चर्चामा छ । पटकपटक विदेश गएर उपचार गराएका प्रधानमन्त्रीले यसै वर्ष मिर्गौला प्रत्यारोपण गराए । उनले दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका हुन् ।
१३ वर्ष पहिले दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका ओलीले यसवर्ष भने स्वदेशका चिकित्सकबाट नै फागुन २१ गते मिर्गौला प्रत्यारोपण गराए । यो १३ वर्षमा ओलीले दिल्ली र थाइल्यान्ड लगायतका ठाउँमा गएर उपचार गराएका थिए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको हो । ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणमा प्रा. डा. उत्तम शर्मा, प्रा. डा. प्रेम ज्ञवाली, डा. पवनराज चालिसे, डा. सुमन चापागाईं, डा. सुजित पौडेल र डा. मनीष प्रधानसँगै भारतीय डा. अनन्त कुमारलगायत संलग्न थिए।
प्रधानमन्त्री हाल मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि आराम गरिरहेका छन् । भलै उनी १८ घण्टा काम गरिरहेको उनको दाबी छन् । प्रधानमन्त्रीको नाजुक स्वास्थ्य अवस्थाको प्रभाव राज्य संचालनमा परेको भनेर बेलाबेला बहस हुने गरेका छन् ।
भारत सरकारले जारी गरेको नक्सा यो वर्ष नेपालमा बहस र विवादको विषय बन्यो । सडकदेखि सदनसम्म यो विषयले व्यापक चर्चा पायो । जम्मु र कश्मिरलाई प्राप्त विशेष अधिकार खोसेपछि भारतले नोभेम्बर २ (कार्तिक १६ गते) मा जारी गरेको नक्सामा नेपालको दार्चुलास्थित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा देखायो ।
ती भूमिमा आफ्नो कब्जामा राखेको र नेपालले दाबी गरिरहेको अवस्थामा औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्सामा राखेपछि सीमाको विषयलाई लिएर सबै राजनीतिक दल एकजुट भए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाए । संसदमा व्यापक छलफल भयो । संसदीय समितिमा पनि छलफल भए । नागरिक समाज र सर्वसाधारण पनि भारतीय कदमविरुद्ध सडकमा उत्रिए । सरकारले पनि दुईदेशबीच कूटनीतिक तहमा छलफल भइरहेको बारम्बार दोहोर्‍याइरह्यो । नापी विभागलाई तत्काल ती भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दार्चुलाको उत्तरी भेगको सुरक्षाका लागि सरकारले सशस्त्र प्रहरी पठाएको छ । ती क्षेत्रमा स्थायी सुरक्षा क्याम्प खडा गरिएका छन् । यो वर्ष चर्चामा रहेको भारतीय नक्सा विवादले नयाँ वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।
सरकारले संसदमा ल्याएका विधेयकले नागरिकलाई संविधानले दिएका अधिकार खोस्ने बहस यो वर्षभरी चल्यो । नागरिक स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउन सरकारले विधेयकको डण्डा चगाएको आवाजलाई मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिले झन् बढाइदिए ।
यसको उच्चतम रूप गुठी विधेयकमा देखियो । कुनैबेला गणतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर लडेका नागरिक अगुवा गुठी विधेयक आएपछि सडमा ओर्लिएका थिए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले संसदमा बैशाख १६ गते दर्ता गरेको गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकले गुठीका जग्गा भूमाफिया वा व्यक्तिका नाममा जाने भन्दै आन्दोलन चर्किएको थियो । उक्त विधेयकमा निजी गुठीलाई सार्वजनिक बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
विधेयक दर्ता भएसँगै विरोध गर्न सडकमा आएका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका स्थानीयको दबाबमा सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । असार ३ गते विधेयक फिर्ता भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै उक्त विरोधलाई सरकारविरुद्धको षडयन्त्र भनेका थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आन्दोलनकारीमाथि बल प्रयोग गर्न आदेश दिए भने तत्कालीन सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सामन्तवादी अवशेष भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । मन्त्रीका अभिव्यक्तिमा लगाम लगाएर विधेयकबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्न चुकेर सरकारले नराम्रो धक्का बेहोर्नुपरेको थियो ।
सरकारले त्यसपछि ल्याएका हरेक विधेयकमा गुठी विधेयकको त्रास देखिएको थियो । संसदमा विधेयकमाथि छलफल गर्दा सरोकारवालाहरूसँगको छलफललाई बढावा दिइयो भने विधेयक ल्याउनुपहिले पनि कतै विरोध हुने व्यवस्था त परेका छैनन् भनेर हेर्न थालियो ।
वर्षभरी चर्चामा रहेका पात्र हुन् नेकपाका नेता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा । अभिव्यक्तिले चर्चा र विवादमा रहेका उनको एउटा टेपकाण्डले पद गयो ।
राज्यमन्त्री भएर सिंहदरबार प्रवेश गरेका बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र हुन् । मन्त्रीमा बढुवा भएपछि सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मा पाए । साथमा अर्को जिम्मेवारी थपियो, सरकारको प्रवक्ता ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय प्रत्येक बिहीबार मात्रै सार्वजनिक गर्ने थिति बसालेका बाँस्कोटाको अभिव्यक्तिले आलोचना खेपरह्यो । निर्णय सार्जनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कसरी लेख्ने र विषय कसरी प्रस्तुत गर्ने भनेर पत्रकारहरूलाई पाठ पढाउने बाँस्कोटा सरकारको आलोचना गर्ने मिडिया हाउस र पत्रकारहरूलाई सधैं निशानामा बनाउँथे । भ्रष्टाचार र अनैतिक आचरणमा आफू कहिल्यै नफस्ने दाबी र त्यस्ता कुरा खोज्न चुनौती दोहोर्‍याउने बाँस्कोटाको पद भने आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएर गयो ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि कमिसनको बार्गेनिङ गर्दै गरेको २ मिनेट ३० सेकेन्डको अडियोले सार्वजनिक भएपछि उनले फागुन ८ गते राजीनामा दिनुपर्‍यो । मन्त्री भएदेखि बालकोटस्थित आफ्नै घरमा बसिरहेका बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्री ओलीले समेत जोगाउन सकेनन् ।
बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेससँग सम्बन्धित एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रले गरेको कमिसन वार्ताको अडियो सार्वजनिक भएकै दिन मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । उक्त अडियोमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा ७० करोडको कमिसन बाँस्कोटालाई आउने उल्लेख थियो । तर, मिश्र एजेन्ट भएको कम्पनीसँग सेक्युरिटी प्रेस खरिद नगरेर अर्कैसँग बढी मूल्यमा खरिद गर्न खोजेपछि उक्त अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
चीनको वुहानबाट उत्पन्न भएको कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)बाट विश्व आक्रान्त छ । ठप्प छ । विश्वको ठूलो जनसंख्या घरभित्र थुनिएको छ । अर्थात् लकडाउनमा छ । नेपालमा पनि यसका बाछिटा दिनदिनै देखिँदै गइरहेका छन् । सरकारले तीन हप्तादेखि लकडाउन लागु गरेको छ । संक्रमित बढ्दै गएका र छिमेकी भारतमा कोरोना संक्रमण फैलिँदो अवस्थामा रहेकाले अझै लकडाउन बढ्ने संकेत पनि मिलिरहेका छन् ।
मुलुक लकडाउन र कोरोनाको विरुद्धमा लागेको अवस्थामा सरकारसँगको निकटताका आधारमा यो भाइरसविरुद्ध लड्ने सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको छ । सरकार मुख्यगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग निकट रहेको व्यापारिक समूहले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने ठेक्का पाएको र त्यसमा अनियमितता गरेको विषय बाहिरिएको छ ।
कम्युटर लगायतका प्राविधिक सामग्रीको ठेक्कापट्टा गर्दै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई)ले सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूसँगको निकटताका आधारमा नै स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा पाएको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागले जारी गरेको टेण्डर आफ्नो नाममा पारेर उसले २०औँ गुणा महंगोका सामग्री सरकारलाई भिडाउने काम मात्रै गरेन काम नलाग्ने सामग्रीसमेत ल्यायो ।
ओम्नी समूहका तुलहरिसिंह भुसाललगायत व्यक्तिहरूले महामारीको बेलामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरेको बदमासीले मुलुक जोखिममा परेको छ । तर, सरकार भने यो ग्रुपलाई कालोसूचीमा राख्ने र कारबाही गर्ने भन्दा पनि उसलाई भुक्तानी दिने र थप सामग्री खरिदको जिम्मेवारी दिने उपाय खोज्दैछ । ओम्नीले पाएको सुरुको टेण्डर रद्द भएको भनिएको छ र नयाँ सामग्री ल्याउने जिम्मा सेनालाई दिइएको छ । त्यसले पनि विवाद उब्जाएको छ । यो विवादले अवस्था सामान्य भएपछि संसद र सडक तताउने देखिन्छ ।
यही काण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीका आइटी सल्लाहकार असगर अलि पनि विवादमा आए । एक अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित यही काण्डको समाचार गायब पारिदिएपछि उनी चर्चामा आए । लकडाउनका कारण राजधानीमा बन्द भएकालाई घर जान दुई दिन समय दिने सरकारको निर्णय सार्वजनिक गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको फेसबुक पेज पनि गायब पारिएको थियो ।
प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७६ २०:०७